I-Urrraca Private Island Eco-Lodge - I-Airbnb
I-Urrraca Private Island Eco-Lodge
Isiqithi sethu sokuzimela ngokwaso sikwasekhaya leMonkey Island Foundation. Sine-bungalows ezi-6 zabucala eziqeshiswayo kunye nendawo yokutyela kwindawo. Sikhethe ukubonelela ngamava awodwa nangenakulibaleka. Ukuba ungathanda ukurenta sonke isiqithi sabucala (silingana ukuya kutsho kubantu abangama-24) nceda uqhagamshelane nathi ukucwangcisa ugcino lwakho.
Akukho kuhlala ubuncinane obufunekayo. $25 intlawulo yokucoca igumbi ngalinye. Isidlo sakusasa sifakiwe. Undwendwe kufuneka +12
Sine-6 phezu kwee-bungalows zamanzi kwisiqithi, ii-bungalows ezi-4 eziqhelekileyo ezilingana nabantu ababini, i-honeymoon hut e-1 ehlala abantu ababini, kunye ne-1 bungalow ye-grou ehlala abantu abathandathu. Onke amagumbi axhotyiswe ngeefeni zombane kunye noomatrasi be-semi orthopedic. Kukho i-WIFI yasimahla kuyo yonke indawo esiqithini, kunye namanzi ashushu kuyo yonke ishawari yangaphakathi nangaphandle. Inkcazo yamagumbi:
-I-bungalows zethu eziqhelekileyo zezabantu ababini, kodwa nganye inokulingana ukuya kwiindwendwe ezi-2 ezongezelelweyo ngentlawulo eyongezelelweyo. Enye yee-bungalows eziqhelekileyo iza neebhedi ezi-2 kunye neebhedi ezi-1 ezimbini; ngelixa abathathu abaseleyo beza ne-1 queen bed kunye ne-1 ibhedi ephindwe kabini. Amagumbi okuhlambela amabini agcweleyo anamanzi ashushu afumaneka ngaphandle kwamagumbi. I-bungalow nganye ine-terrace yabucala, ishawari yamanzi acocekileyo yangaphandle enamanzi ashushu kunye nedesika ejonge elwandle. Ilanga liphuma kanye phambi kwezi bungalows unyaka wonke.
-Indlwana yethu yehoneymooners ilingana nabantu ababini, kwaye yeyona ndawo yokulala yokubhiyozela ihoneymoon, isikhumbuzo, okanye ukubaleka kwezothando kunye nomntu wakho obalulekileyo. Le ndlu inemigangatho emi-2 ibandakanya indawo yokuphumla ejonge kwimangrove, igumbi lokuhlambela labucala eligcweleyo elinamanzi ashushu, kunye neyona ndawo intsha, ibucala yabucala yesiqithi enokufikelela ngokuthe ngqo elwandle. Phezulu uya kufumana ikhabethe eliphangaleleyo, itafile yokunxiba yerustic, kunye nebhedi yokumkanikazi. Ngexabiso elongezelelweyo singenza amalungiselelo okuseta ngothando ngebhotile epholileyo yechampagne kwindawo yakho yokuphumla...ilungele izindululo kunye nemibhiyozo yothando. Akukho ndwendwe ezongezelelweyo ezivumelekileyo kwi-honeymooners hut
-I-bungalow yethu enemigangatho emibini ebanzi yamaqela ilungele amaqela ukuya kuthi ga kubantu abathandathu. Iza neebhedi ezimbini ezingamawele kunye neebhedi ezi-2 zokumkanikazi. Kumgangatho wokuqala kukho indawo evulekileyo yolwandle, igumbi lokuhlambela eligcwele labucala elinamanzi ashushu, kunye nendawo yokuphumla ene-bar kunye nojingi phezu kwamanzi. Indawo yokulala imi kumgangatho wesibini, kwaye ineefestile zepaneli zeglasi eziphangaleleyo ezibonelela ngembono etshayelayo yolwandle kunye nempepho entle kakhulu imini yonke. Ilanga liphuma kanye phambi kwe-bungalow yosapho unyaka wonke.
Ibekwe elwandle i-Urraca Private Island ibekwe kweyona ndawo izolileyo, eyona ndawo icocekileyo ye Bocas del Toro archipelago, kunxweme olukumantla eCaribbean ePanama. Kuphela yimizuzu engama-30 ngephenyane ukusuka e-Isla Colon uya kufumana le paradesi ingasese.
I-eco lodge kwisiqithi se-mangrove esingenawo umhlaba wokwenyani, apho sonke isakhiwo sakhiwe phezu kwezinti phezu kwamanzi, sidityaniswe ngamadokodo. Ixhonywe phezu kwamanzi acwebezelayo ekristale, uya kukwazi ukubona izilwanyana zasendle ezimangalisayo naphi na apho ujika khona. Ukusondela kwethu kumahlathi e-mangrove, amadlelo engca yolwandle, kunye ne-coral reefs kuya kukuvumela ukuba ujonge ngokulula iindlela ezahlukeneyo zendalo.
Yonwabela iimbono eziphefumlayo zeZapatilla Cays ezidumileyo, iziqithi ezibini ezintle ezibekwe kanye phambi kwe-Urraca, kunye nemizuzu nje ukusuka ngesikhephe. Phakathi kweZapatilla Cays kunye nesiqithi sethu kukho i-barrier reef esinika amanzi azolileyo, afana nechweba, kodwa phakathi kolwandle; oku kuguqulela kwimiboniso efana nesipili yolwandle yokuphuma kwelanga kunye nokutshona kwelanga unyaka wonke. Ebusuku esi siqithi singqongwe ngamanzi e-bioluminescent phantsi kwesibhakabhaka esizaliswe ziinkwenkwezi.
UFrancine, ongumnini ongumFrentshi waseKhanada, wakha iUrraca Private Island ngokuthanda indalo. Unqwenela ukwabelana ngokuthanda kwakhe okusingqongileyo kunye neenkawu kunye nabo batyelela isiqithi. Ukwanqwenela ukubuyisela kumhlaba, kunye nomthonyama uNgäbe ngokubabonelela ngemisebenzi nokubavumela ukuba babe yinxalenye yephupha lakhe. Iphupha lakhe kukuphila ubomi obulula kungekho nto yimbi ngaphandle kweenkawu zakhe ezizithandayo, ipleyiti yelobster entsha kunye neglasi ebandayo yerum.
Wamkelekile kula mava amangalisayo!
I-eco lodge yabantu abadala kuphela kwisiqithi se-mangrove esingenawo umhlaba wokwenyani, apho sonke isakhiwo sakhiwe phezu kwezibonda phezu kwamanzi, sidityaniswe ngamadokodo. Ixhonywe phezu kwamanzi acwebezelayo ekristale, uya kukwazi ukubona izilwanyana zasendle ezimangalisayo naphi na apho ujika khona. Ukusondela kwethu kumahlathi e-mangrove, amadlelo engca yolwandle, kunye ne-coral reefs kuya kukuvumela ukuba ujonge ngokulula iindlela ezahlukeneyo zendalo.
Sinendawo yokutyela esiqithini apho unokuthenga isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa, iziselo, kunye neecocktails (isidlo sakusasa sibandakanyiwe kwixabiso lokuhlala kwakho)
Ndiya kuhlala ndikhona ngexesha lokuhlala kwakho ukukunceda ukhethe kwaye ucwangcise ukhenketho kunye nemisebenzi. Iqela lam kunye nam siya kuhamba ngaphezulu nangaphaya ukuze siqinisekise ukuba wonke umzuzu weholide yakho uyahlangabezana nolindelo lwakho. Ndijonge phambili ekudibaneni nawe kwaye ndikuncede ufumane bonke ubuhle obunokunikezelwa ngulo mmandla ukhethekileyo wasePanama.
Sinendawo yokutyela esiqithini apho unokuthenga isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa, iziselo, kunye neecocktails (isidlo sakusasa sibandakanyiwe kwixabiso lokuhlala kwakho…